Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Abhinash Das, hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 15 ka hatramin’ny 21 Oktobra 2019 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Oktobra 2019 11:03 GMT 1	 · Mpanoratra Christie Maria James Nandika Liva Andriamanantena
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Abhinash Das (@abhinashd ) ny fanontaniana sy valiny etoana izay manolotra ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Sarin'i Abhinash Das
Izaho no Abhinash Das avy any Karbi Anglong, Assam. Vao tsy ela aho no nahavita ny fianarako ary mampianatra aho ankehitriny. Tiako ny manao asa an-tsitrapo ho an'ireo fotokevitra hanampiana ny olona sy mba hampisy fiantraikany tsara eo amin'ny fiarahamonintsika.
Ny Assamey no fitenin-drazako. Assamey no fiteny ofisialy any amin'ny fanjakana Assam, India. Ao Assam, misy ny lalàna manome antoka ny fanomezana vahana ny fiteny any an-tsekoly, ny birao ary ny toerana ho an'ny daholobe. Tsy maintsy atao ny mampianatra ilay fiteny any amin'ny sekoly tsirairay mba hahazoana mahatakatra tsara ilay fiteny.
Mandritra io herinandro io, hohasongadiko ny fitenin-drazako sy ny fiteny iray hafa antsoina hoe Karbi ary ireo fiteny sasany tandindonin-doza ao amin'ny fanjakanay. Ankoatra izay, hifantoka momba ny resaka kolontsaina, ny fombafomba ary ny fomba hiarovana sy hitazonana ny mari-panondroana ny kolotsainay sy ny fiteninay aho.
Naniry hatrany aho ny hampiroborobo sy haneho ny fiteniko manokana amin'ny Aterineto izay tena mari-panondroana ahy. Tena faly aho isaky ny mahita zavatra amin'ny fiteniko amin'ny Aterineto. Naniry ny hianatra ny fiteny Karbi aho nandritra ny fanambin'ny fiteny IYIL 2019 ary nanomboka nitady ny fitaovana fampianarana an-tserasera momba izany saingy nampalahelo fa tsy dia nisy zavatra betsaka hitako. Noho izany tiako hatrany ny maka antoka fa manana loharano ampy an-tserasera ny fiteny mba hahafahan'ny olona mahafantatra momba azy. Tsy ampy ny loharano misy rehefa hoe hianatra ny fiteny Assamey na ny rakibolana na ny fitsipi-pitenenana ihany koa. Tena mahafinaritra raha afaka miasa amin'izany isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/15/143991/